Chaud - Franska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: chaud (Franska - Burmesiska)
လူသည် နှစ်ယောက်အတူအိပ်လျှင် နွေးတတ် ၏။ တယောက်တည်းသောသူမူကား၊ အဘယ်သို့ နွေးနိုင် သနည်း။
ကိုယ်တော်ထံသို့ ရောက်အံ့သောငှါ ထွက်လာ သောနေ့၌ ခရီးရိက္ခာဘို့ ကိုယ်အိမ်မှ ဆောင်ယူခဲ့သော ဤမုန့်သည် ပူနွေးလျက်ရှိပါ၏။ ယခုကြည့်ပါ။ အောက် လျက် မှိုတက်လျက်ရှိပါ၏။
il n'y avait pas de douches interminables, de bains chauds, de rain parties ou d'énormes réservoirs d'eau pour s'assurer que l'eau continuait à couler durant toutes les ablutions.
ရေ​ကို​မှီခို​နေ​သော တာဝန်​မ​ကျေ​သော စက်​မှု​လုပ်​ငန်း​များ နှင့် အခြား​အကြောင်း​ချက်​များ​စွာ ပါဝင်​နေ​သည်။
ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားမိန့်တော်မူသည် ကား၊ နေအရောင်ထဲမှာ ကြည်လင်သော အရှိန်ကဲ့သို့၎င်း၊ အသီးအနှံကို သိမ်းယူရာ ပူသောကာလ၌ နှင်းနှင့် ပြည့်စုံသော မိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့၎င်း၊ ငါသည်ကျိန်းဝပ်၍ ငါ့ နေ ရာအရပ်မှာ ကြည့်ရှုမည်။
သင်တို့သည် များစွာသော မျိုးစေ့ကို ကြဲသော် လည်း အသီးအနှံနည်းပါးရ၏။ စားရသော်လည်း ဝစွာ မစားရကြ။ သောက်သော်လည်း ဝစွာ မသောက်ရကြ။ အဝတ်ကို ဝတ်ရသော်လည်း နွေးစွာ မဝတ်ရကြ။ အလုပ် လုပ်၍ အခကို ခံရသော်လည်း မလုံသော အိတ်ထဲမှာ သိုထားရကြ၏။
နေထွက်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် အလွန်ပူ သောအရှေ့လေကို ပြင်ဆင်တော်မူ၍၊ ယောန၏ခေါင်းကို နေထိခိုက်သဖြင့် သူသည် မော၍ သေချင်သောစိတ်ရှိ လျက်၊ ငါ့အသက်သေခြင်းသည် ရှင်ခြင်းထက် သာ၍ ကောင်းသည်ဟု မြည်တမ်းလေ၏။
ဇိဘောင်သားကား၊ အာယနှင့်အာနတည်း။ ထိုအာနကား၊ အဘဇိဘောင်၏ မြည်းတို့ကို ထိန်းသော အခါ၊ တော၌နွေးသော စမ်းရေတွင်းတို့ကို တွေ့သော သူပေတည်း။
မြေပေါ်မှာ တောင်လေဖြင့်အချမ်းပျောက်စေ တော်မူသောအခါ၊ သင်၏အဝတ်သည် အဘယ်သို့သော အားဖြင့် နွေးသည်ကို၎င်း နားလည်သလော။
ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ရှေ့တော်မုန့်မှ တပါးအခြားသော မုန့်မရှိသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော မုန့်ကိုပေး၏။ ထိုရှေ့တော်မုန့်စား၌ မုန့်သစ်ကို တင်ထားအံ့သောငှါ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှ နှုတ်ပယ် နှင့်ပြီ။
активності (Ukrainska>Tyska)avviene (Italienska>Maori)litteratura (Maltesiska>Franska)långhalsad (Svenska>Engelska)népségbõl (Ungerska>Latin)tayo ay mag hati hati sa bayad ng alak (Tagalog>Engelska)orderint dum metuant (Latin>Engelska)فیلم سکس کم سن زیر 13سال (Engelska>Franska)才成了音乐 (Kinesiska (förenklad)>Engelska)sono stati sottoposti ad un esame batteriologico (Italienska>Engelska)apko koi ehsaas nhi (Hindi>Engelska)sans (Tyska>Ryska)ubambo lwami (Xhosa>Engelska)vertegenwoordigen (Holländska>Engelska)it has several important drawbacks (Engelska>Portugisiska)startseite des shops (Tyska>Italienska)kan ikke åbne tabelfilen (Danska>Engelska)alis muna ako mahal kakain lang ako (Tagalog>Engelska)تقتسمونها (Arabiska>Xhosa)lufthansa (Engelska>Rumänska)kollegialen (Tyska>Italienska)produktionsgebiet (Tyska>Spanska)dederunt (Latin>Serbiska)entregará (Spanska>Vietnamesiska)eppadi irukinga? (Tamil>Engelska)